FAQ - Linyi Thunder Izindophu Co., Ltd
Ingabe ukunikeza amasampuli amahhala?
A: Yebo, kodwa hhayi yonke imikhiqizo. Ukuze amasampuli amahhala, kudingeka sivele inombolo ye-akhawunti courier yakho. Zeminye imikhiqizo lenani eliphakeme, imali isampula nawo uyadingeka. Kodwa icala isampula kungenziwa emalini uma ubeka umyalelo.
Kuyini izinkokhelo zakho?
A: Izinkokhelo: singakwazi ukwamukela T / T, L / C.
Kuyoze kube nini mayelana ukulethwa isikhathi sakho?
Ngokusho zokwandisa nokuthuthukisa imikhiqizo oda, ngokuvamile 7 ~ 30days after receipt of your order and deposit, and we choose the best forwarder to supply service for both of us.
Ingabe uyamukela OEM phrojekthi?
OEM oda wayamukela ngemfudumalo e Dawn Marine. Thina kuqukethe nakho siphumelele ekwenzeni OEM amaphrojekthi. Ngaphezu kwalokho ngaphezulu, sinalo design ithimba angakunika iziphakamiso professional.
Ingabe imikhiqizo evivinywa phambi lokuthumela?
Yebo, yonke imikhiqizo yethu wayefaneleka phambi lokuthumela.
Ingabe uyamukela ubuningi oda elincane?
Nokho, sasithi kuncike. Uma sinalo isitokwe noma imikhiqizo efanayo umkhiqizo wethu line, asikwazanga bawuhlela. Kungenjalo, kumele sithole isisombululo ndawonye. Kodwa ngeke sizame konke okusemandleni ethu ukuba sihlangabezane nezimfuneko yakho.
Ngingaba kanjani nomthengisi wakho yena yedwa?
Nokho, sasithi incike ezifundeni ezahlukene, ukuze uthole imininingwane engaphezulu, sicela uthintane yokuthengisa bethu abamele.
Ingabe sinalo Ukuvakashela ifektri yakho?
Siyakwamukela embonini yethu, futhi thina ukunikezela isevisi pick up.
Chain isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo Block , Ukuphakamisa Izindophu Hardware , Long Xhumanisa Chain , isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo Block , izinsika Hardware , Chain Link,